Filoha Rajaonarimampianina : Mitohy ny asa fampandrosoana -
AccueilSongandinaFiloha Rajaonarimampianina : Mitohy ny asa fampandrosoana
Tsy mitsahatra mijery izay hampandrosoana ny firenena ny Filoha Rajaonarimampianina Hery. Porofon’izany ny fitokanana ireo fotodrafitrasa fototra ataony manerana ny Nosy. Nandritra iny volana iny fotsiny izao, fotodrafitrasa dimy tena manala ny fahasahiranana no notokanan’ny Filoha.
Nahazo toeram-pandidiana Ambato-Boeny
Toa ny efa nataony tany amin’ny distrika hafa, fotodrafitrasa fototra izay tena manala fahasahiranana ny mponina any amin’ny distrikan’Ambato-Boeny no natolotry ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery dia ny toeram-pandidiana (Bloc opératoire) tena raitra sy ary fomba. Tonga tany an-toerana ny tenany ny 16 mey teo nitokana izany tamin’ny fomba ofisialy. Raha tany Mahajanga sy Maevatanana noho izany, ireo marary mila fandidiana tany an-toerana teo aloha no mila vonjy, dia vita ao Ambato Boeny izany ankehitriny. Fanamby efa napetraky ny Filoha ity fametrahana toeram-pandidiana any an-toerana ity, dia izao tanteraka izao. Tanjon’ny Filoha Rajaonarimampianina, ny ahazoan’ny vahoaka rehetra manerana ny Nosy ny fitsaboana mendrika sy sahaza. Marihina fa toeram-pandidiana faha-30 natolotry ny Filohan’ny Repoblika ity an’Ambato-Boeny ity, izay tafiditra indrindra ao anatin’ny vina Fisandratana 2030, satria ny fahasalamana no voalohan-karena.
Nitokana ny birao ny zana-tobim-paritry ny zandarimaria
Mitohy ny asa fampandrosoana ataon’ny Fanjakana na dia eo aza ireo asa fanakorontanana. Satria ny asa ihany hoy ny Filoham-pirenena no hamaliana ireo kiana ataon’ny mpanohitra, raha nitokana ny biraon’ny zana-tobim-paritry ny zandarimaria tany amin’ny kaomina Manakambahiny, distrikan’Ambatondrazaka, faritra Alaotra Mangoro ny tenany, 25 mey lasa teo. Isan’ireo asa vita izay nolazainy tamin’izany fotoana izany fa setrin’ireo fihantsiana isan-karazany volen’ireo mpanao politika sasany eto amin’ny firenena io fotodrafitrasa io. Nomarihiny tamin’izay fotoana izay moa fa fampandrosoana sy fanamafisana ny fiarovana akaiky vahoaka io « Poste Avancé » n’ny zandary io. Ankoatra ireo mponina manodidina ny 3 alina isa ao amin’ny kaomina izay mampiantrano ity zana-tobim-paritra ity moa dia kaomina roa hafa, izay ao amin’ny distrikan’Ambatondrazaka ihany no voalaza fa hahazo tombontsoa amin’ny fanatsarana ny fandriam-pahalemana any an-toerana.
Fotodrafitrasa telo sosona no azon’ Ambositra
Isan’ny nanamarika ny volana mey iny ihany koa ny lanonana telo sosona izay notronin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, ny 28 mey teo, tany amin’ny distrikan’Ambositra, Faritra Amoron’i Mania. Nitokana ny biraon’ny kaomina ambanivohitr’i Kianjandrakefina, izay vao nohavaozina satria simba noho ny rambondanitra niseho ny taona 2016 ny Filohan’ny Repoblika. Mbola nitokana ny “Lycée Technique Professionnel” tao amin’ny kaomina Fahizay ihany koa izy, ary nametraka ny vato fototry ny tsena vaovao tao amin’ny kaomina Ambalasoaray. Tanora avy amin’ny kaomina 12 manodidina ankehitriny no afaka misitraka fiofanana ao amin’io Lisea teknika io. Izay manampy be dia be amin’ny fiadiana amin’ny tsy fananan-kasa sy ny fahantrana, ary entina miatrika fampandrosoana. Nanambara moa ny Filoham-pirenena, tamin’io fotoana io fa tokony hibanjina ny tombontsoa iombonana ny tsirairay, ary efa mazava ny vina entina hampisandratra ny firenena. « Ho tohizantsika ny ezaka izay efa vita, sahia mijoro hanohitra ny herisetra, sahia mijoro hitaky ny ara-dalàna. Ny asa vita no aoka hifampitsarantsika rehetra. » hoy ny Filoha Rajaonarimampianina Hery.
Toa ny firenena rehetra manerantany, dia isan’ny nankalaza ny andro eran-tany momba ny rano ihany koa i Madagasikara, omaly. Ny kaominina Ambondrona, ao anatin’ny distrikan’Isandra, faritra Matsiatra Ambony no nosafidiana nanaovana ny fanamarihana, niaraka tamin’ny ...Tohiny